17 Jehova wee gwa Mozis, sị: 2 “Gwa ụmụ Izrel okwu, natakwa ndị isi+ ha niile mkpara iri na abụọ, dị ka ụlọ ndị nna ha si dị, otu mkpara+ maka otu ọnụmara. Ị ga-ede aha onye nke ọ bụla na mkpara ya. 3 Ị ga-edekwa aha Erọn na mkpara Livaị, n’ihi na otu mkpara ka e nwere maka onyeisi ụlọ ndị nna ha. 4 Ị ga-achịsa ha n’ụlọikwuu nzute, n’ihu Ihe Àmà,+ bụ́ ebe m na-apụta n’ihu unu mgbe niile.+ 5 Ọ ga-erukwa na onye m ga-ahọrọ,+ mkpara ya ga-awa okooko, m ga-emekwa ka ụmụ Izrel kwụsị ntamu ha na-atamu+ megide m, nke ha na-atamukwa megide unu.”+ 6 Mozis wee gwa ụmụ Izrel okwu, ndị isi ha niile wee nye ya otu mkpara otu mkpara maka onyeisi nke ọ bụla, dị ka ụlọ ndị nna ha si dị, mkpara iri na abụọ;+ mkpara Erọn bụ otu n’ime mkpara ndị ahụ.+ 7 Mozis wee chịsa mkpara ndị ahụ n’ihu Jehova n’ụlọikwuu Ihe Àmà.+ 8 O wee ruo n’echi ya na mgbe Mozis banyere n’ụlọikwuu Ihe Àmà, lee! mkpara Erọn, nke bụ́ maka ụlọ Livaị, awaala okooko, ọ makwara ifuru, waa okooko ma mịa mkpụrụ almọnd chara acha. 9 Mozis wee si n’ihu Jehova chịpụtara ụmụ Izrel niile mkpara ahụ niile, onye ọ bụla n’ime ha wee lee mkpara ndị ahụ ma were nke ya. 10 E mesịa, Jehova gwara Mozis, sị: “Debeghachi mkpara+ Erọn n’ihu Ihe Àmà ka ọ bụrụ ihe a ga-edebe ịbụrụ ụmụ nnupụisi+ a ihe ịrịba ama,+ ka ha kwụsị ntamu ha na-atamu megide m, ka ha ghara ịnwụ.” 11 Ozugbo ahụ, Mozis mere nnọọ dị ka Jehova nyere ya n’iwu. O mere nnọọ otú ahụ. 12 Ụmụ Izrel wee malite ịgwa Mozis, sị: “Anyị aghaghị ịnwụ, anyị aghaghị ịla n’iyi, anyị niile aghaghị ịla n’iyi.+ 13 Onye ọ bụla nke bịara nso,+ nke bịara ụlọikwuu Jehova nso, ga-anwụ!+ Ànyị ga-esi otú ahụ nwụchaa?”+